Waxay u muuqan kartaa mid fudud, laakiin si loo xisaabiyo Qiimaha 'Churn Rate' ee Adeeg ahaan Adeeg ahaan, waxaa jira waxyaabo yar yar. Si fudud, Churn Rate waa tirada macaamiisha ka tagtay oo loo qeybiyay tirada guud ee macaamiisha bilowga mudada lagu qiyaasay… loo xisaabiyay boqolkiiba. Waa tan Caanaha 'Churn Rate':
Waa inaad sii kala saartaa macaamiishaada isku darka alaabta ama xirmada ay ka tirsan yihiin. Tani waxay ku siin doontaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sida wanaagsan ee qiimeyntaada ama xirmooyinka sheyga ay u saameeyaan xiiq.
Churn had iyo jeer maahan wax xun companies shirkado badan oo SaaS ah ayaa u isticmaala churn si ay ugu beddelaan macaamiisha aan faa'iido doonka ahayn kuwo faa'iido badan leh. In kasta oo laga yaabo inaad ku yaraato xaddiga xaddidan xaaladahaas, ganacsigaagu wuxuu noqon doonaa mid faa'iido badan mustaqbalka fog. Tan waxaa loo yaqaan Dakhliga Soo Noqnoqda ee Bilkasta Soo Noqda (MRR) Churn, halkaasoo dakhligaaga dheeraadka ah ee macaamiisha cusub iyo kuwa hadda jira ay ka sii gudbayaan dakhliga aad ku lumineyso hoos u dhaca iyo joojinta.